यी हुन् आपतकालिन उपचारमा प्रयोग हुने ११ जडिबुटी जनिराखौ – Anurag Post
Home / स्वास्थ्य / यी हुन् आपतकालिन उपचारमा प्रयोग हुने ११ जडिबुटी जनिराखौ
यी हुन् आपतकालिन उपचारमा प्रयोग हुने ११ जडिबुटी जनिराखौ
Anurag Post April 26, 2019	स्वास्थ्य Leaveacomment 283 Views
भोक नलाग्ने, बान्ता हुने, अपच हुने आदि समस्या छन् भने सुकुमेल खानाले कम हुन्छ। तिर्खा लागिरहन्छ अथवा घाँटी पोल्ने गरिरहन्छ भने सुकुमेल मिसाइएको पानी पिउँदा राम्रो हुन्छ। छातीमा कफ जमेको छ र सास लिन गाह्रो भइरहेको छ भने सुकुमेल खानाले कफ बाहिर निस्कन्छ र शरीरलाई राहत मिल्छ। रुघाखोकी लागेको छ अथवा घाँटी खसखस भइरहने समस्या छ भने सुकुमेललाई पिसेर महसँग खानुपर्छ। सुक्खा खोकी लागेको छ भने सुकुमेल, तोरीको तेल र चिनी मिसाएर खानुपर्छ। यसले कफ बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ। ज्वरो आएर जीउ पोलेको छ भने सुकुमेल खानाले सहज महसुस हुन्छ।- स्वास्थ्य खबर बाट
Previous पाथिभरा माताको दर्सन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस / वि.सं. २०७६ वैशाख १२ गते बिहीबार
यसरी राख्नुहोस् कपाललाई स्वस्थ र स्टाईलिस
स्तनपान गराउने आमाले के–के कुरामा ध्यान दिने ?
थोरै खाए बल, धेरै खाए मल
काठमाडौं । दाँतले अनुहारको सौन्दर्यता निखारेर ल्याउँछ । यदि दाँत राम्रो नभएमा अनुहारको सौन्दर्यतामा अलि …